Tenisy ITF / CAT U14 : resy ny ekipan’olon-droa | NewsMada
Tenisy ITF / CAT U14 : resy ny ekipan’olon-droa
Lasa ambony vao tra-pahavoazana ny katitakely malagasy teo amin’ny fiadiana ny “tournoi ITF / CAT”, taranja tenisy sokajy U12 sy U14 lahy sy vavy. Fihaonana tanterahina atsy Maorisy. Tsy namokatra fa samy resy teo amin’ny lalao famaranana avokoa ireo ekipa ho an’olon-droa miaraka vehivavy, ho an’ireo sokajy roa ireo, omaly.
Raha ny vokatra, lavon’ilay Afrikanina tatsimo, Pienaar sy ilay teratany botsoaney, Tsiang, i Finaritra sy Manuella, teo amin’ny sokajy U14. Tamin’ny seta 2 noho 0 (3/6 ; 1/6), naharesy azy mirahavavy. Ny seta voalohany ihany no afaka nanohitra ireto mpifanandrina aminy ireto katitakely malagasy ireto fa nataon’ireo mpifanandrina taminy, tsy nisotro rano kosa teo amin’ny seta faharoa.
Tsy afa-nanoatra ihany koa i Safidisoa sy Yaelle, teo amin’ny U12. Tamin’ny seta 2 noho 0 (0/6 ; 1/6) nanilihan’ilay Afrikanina tatsimo, Naledi sy ilay Nizerianina, Edwards Mary Love azy mirahavavy. Na izany aza, efa dingana goavana no vitan’izy ireo satria tsy mody maina fa mitondra ny medaly volafotsy mody.